Wargeyska Free Worldwide Shipping - Gaadiidka Caalamiga ah ee bilaashka ah - WoopShop
Alaabta / zł0.00 0
WoopShop.com waxay ku faraxsan tahay inay bixiso adeegyo maraakiibta adduunka oo dhan oo bilaash ah oo hadda ka shaqeeya in kabadan 200 oo waddan. Wax micno nooguma tarin annaga oo keenaya macaamiisheenna qiimo weyn iyo adeeg. Waxaan sii wadi doonnaa inaan kobcino si aan ula kulanno baahiyaha macaamiisheenna oo dhan, anagoo gaarsiineyna adeeg ka sarreeya wixii laga filayo dhammaan meel kasta oo adduunka ah.
Xirmooyinka ka socda bakhaarradeenna Shiinaha waxaa lagu soo dejin doonaa ePacket ama EMS iyadoo kuxiran culayska iyo cabirka badeecada. Xirmooyinka laga soo xareeyay bakhaarradeenna Mareykanka waxaa lagu raray USPS. Sidaa darteed, sababao macquul ahaaneed awgeed, waxyaabaha qaarkood ayaa lagu rari doonaa baakado gooni ah.
WoopShop waxay ku faraxsan tahay inay macaamiisheena siiso maraakiib lacag la'aan ah oo ku socda dalalka 200 + adduunka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira meelo aan awoodno inaanu u dirno. Haddii aad ka dhacdo mid ka mid ah wadamadaas waan kula soo xiriiri doonaa.
Khidmadaha Khaaska ah
Waxaan xakameyneynaa khidmadaha macaamiisha, Kuma masuul ka ah khidmadaha kastamka marka alaabadu soo diraan maaddaama ay siyaasadeeda iyo hawlaha soo dejinta ay si aad ah ugu kala duwan yihiin waddanka. Adiga oo iibsanaya alaabtayada, waxaad ogolaaneysaa in hal ama kabadan baakidh ayaa laguu soo diri karo waxaana laga yaabaa in lagu siiyo kharashka markaad timaaddo wadankaaga.
Hababka Gaadiidka iyo Wakhtiga Bixinta
Amarada oo dhan waxaa la kala diraa 36 saacadood gudahood. Soo gudbintu waxay qaadataa 7 ilaa 20 maalmood oo shaqo iyo marar dhif ah 30 maalmood shaqo.
Location Waqtiga la Rakhiyay
United States 7-20 maalmaha ganacsiga
Canada, Europe 10-20 maalmaha ganacsiga
Australia, New Zealand 10-30 maalmaha ganacsiga
Mexico, Central America, South America 15-30 maalmaha ganacsiga
Waxaad heli doontaa emayl mar haddii maraakiibtaada amarrada ku jira macluumaadka raadraacaaga, laakiin mararka qaarkood sabab la xiriirta dhoofinta maraakiibta oo bilaash ah lama heli karo. Mararka qaarkood raadinta IDs waxay qaadataa 2-5 maalmood oo shaqo oo loogu talagalay macluumaadka raadraaca si loogu casriyeeyo nidaamka. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah, fadlan ha ka labalabeyn inaad nala soo xiriirto waxaanan ku dadaali doonnaa sidii aan kaaga caawin lahayn.